Guudmarka SONGZ | Songz Gawaarida Hawada Co., Ltd.
SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTDhalkan waxaa loogu magac daray SONGZ, waxaa la aasaasay 1998. Waa shirkad wadaag ah oo kayd ah oo ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta, soo saarista iyo iibinta nidaamyada qaboojiyaha gawaarida. Waxaa si guul leh loogu taxay Shenzhen Stock Exchange sanadkii 2010. Soo gaabinta saamiyada: SONGZ, lambarka saamiyada: 002454. Tani waxay SONGZ ka dhigeysaa shirkaddii ugu horreysay ee liis garaysay ee warshadaha qaboojiyeyaasha gawaarida Shiinaha. SONGZ waxay u heelan tahay nidaamyada qaboojiyaha gawaarida gawaarida si heer sare ah waxayna noqoneysaa alaab-qeybiye heer caalami ah oo leh farsamo casri ah iyo ka shaqeynta gudaha mustaqbalka dhow.
SONGZ ganacsigu wuxuu daboolayaa qaboojiyaha basaska korontada iyo kuwa waaweyn ee caadiga ah, qaboojiyaha gaariga rakaabka, qaboojiyaha tareenka transit-ka, qaybaha qaboojiyaha gawaarida, kombaresarada korontada, iyo qalabka dayactirka qaboojiyaha gaariga.
SONGZ Lix Ganacsi oo Muhiim ah
Saldhigga Waxsoosaarka SONGZ
Iyadoo leh 13 xarun wax soo saar, SONGZ waxay sameysay qaab udub dhexaad u ah Shanghai, Shiinaha waxayna ku saleysan tahay Finland, Indonesia iyo China magaalooyinka Anhui, Chongqing, Wuhan, Liuzhou, Chengdu, Beijing, Xiamen, Suzhou iyo magaalooyin kale. Tirada guud ee shaqaalaha waxay ka badnaayeen 3,000.
SONGZ HQ, Shanghai Shiinaha
Joogitaanka Suuqa SONGZ
Wax soo saarka qaboojiyaha baska SONGZ waxaa la siiyay ku dhowaad dhammaan soo saarayaasha basaska Shiinaha, sida Yutong, BYD, Dahabka Dahabiga ah, Zhongtong, iyo wixii la mid ah Badeecadaha waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 40 dal, oo ay ku jiraan waddamada Yurub sida Ruushka, Ingiriiska, Talyaaniga, iyo wadamada Nordic, wadamada Mareykanka sida Mexico, Brazil, Chile, Colombia, iyo Ecuador, wadamada Aasiya sida Japan, South Korea, India, Malaysia, Indonesia, Thailand iyo Vietnam, sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa Australia iyo New Zealand.
Isla mar ahaantaana, waxaan ku ururinnay macaamiil fara badan macaamiisha ganacsiga meheradda qaboojiyaha gawaarida rakaabka, qaboojiyaha gawaarida tareenka iyo qaybaha qaboojiyaha gawaarida.
Macaamiisha waaweyn ee SONGZ ee soo saaraha basaska
Shayga ayaa si heer sare ah u aqoonsadeen macaamiisha dal iyo dibadba leh heerar tayo sare leh sida keydinta tamarta, ilaalinta deegaanka, amniga, buuqa yar, raaxada, iyo miisaanka fudud.
SONGZ waxay had iyo jeer ku dhegan tahay istiraatiijiyadda wax soo saarka ee "hufan, keydinta tamarta iyo bey'adda u habboon" iyo "tiknoolajiyad tayo sare leh, adeeg sare leh" oo ku saabsan fikradda suuqgeynta farsamada, oo ay ka go'an tahay inay noqoto khabiir maaraynta heerkulka baabuurta heer caalami ah.
Awood Soosaarka SONGZ
SONGZ waxay soo bandhigaysaa qalab caalami ah oo hogaaminaya qalab caqli iyo nidaam macluumaad si loo hubiyo waxtarka wax soo saarka, xasiloonida iyo saxsanaanta.
Qalabka horumarsan sida khadka tooska ah ee wax soo saarka buuxa / khadka isku imaatinka, khadka ogaanshaha ammonia otomaatigga ah, khadka tooska ah ee waxsoosaarka ee taarikada firfircoonida iyo duruufaha taagan, Mashiinka xawaaraha sare leh, mashiinka alxanka ee argagax leh, foornada brazing iyo mashiinka alxanka ayaa si weyn u wanaajiya wax soo saarka. hufnaan.
SONGZ waxay mideyneysaa ilaha iyo macluumaadka iyo sidoo kale Xogta iyo warshadeynta waxayna dhiseysaa warshad caqli-gal ah oo dijitaal ah iyadoo la adeegsanayo nidaamyada macluumaadka sida ERP, MES iyo WMS.
Qadka Ogaanshaha Amonia
Mashiinka Fin-xawaaraha sare
Mashiinka Alxanka Qalabka Argon ee otomaatiga ah
Xilligii Warshadaha 4.0, SONGZ wuxuu si firfircoon u dhisayaa warshado casri ah oo casri ah, wuxuu aasaasayaa waxsoosaar caqli badan, wuxuu abuuraa yoolka shirkadaha caqliga badan, wuxuu hagaajiyaa heerka maaraynta wax soo saarka ee shirkadaha, wuxuu maamulka wax soo saarka ka dhigayaa macluumaad ku saleysan macluumaad badan, iswada, dijitaal iyo saynis. waxtarka, iyo kor u qaadista shirkadaha casriyaynta soosaarka.
Hubinta Tayada SONGZ
Siyaasadda Tayada: Waxay fulisaa heerarka nidaamka oo waxay diiradda saaraan qanacsanaanta macaamiisha.
Ku guuleysto qanacsanaanta macaamiisha adoo u maraya cabbiraad joogto ah iyo dib u eegis.
Siyaasadda Deegaanka: Ilaalinta deegaanka, ilaalinta tamarta iyo yareynta isticmaalka, dib-u-warshadaynta, ka-qaybgalka guud, u hoggaansanaanta qaanuunka iyo horumarinta joogtada ah.
Siyaasadda Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada: Caafimaadka waxa ugu horreeya, nabadgelyada marka hore, ka hortagga sayniska, ka-qaybgalka guud, u hoggaansanaanta qaanuunka iyo horumarka joogtada ah.
SONGZ waxay si adag u dhaqan gelisaa TS16949 waxayna diiradda saareysaa qanacsanaanta macaamiisha, wadarta guud ee ka qayb qaadashada iyo maaraynta tayada. Inta lagu jiro xakamaynta tayada soo socota, SONGZ waxay si isdaba joog ah u hagaajinaysaa qorshaha muunad qaadista ee isku halaynta waxayna si joogto ah u hagaajineysaa aaladaha tijaabada si loogu kalsoonaado natiijooyinka imtixaanka. SONGZ hadda waxay leedahay 527 qalab tijaabo ah oo lagu falanqeynayo qalabka imtixaanka sida ku cad MSA si loo qanciyo shuruudaha. Ka sokow, SONGZ waxay hubisaa isku mid ahaanta alaabada iyada oo loo marayo dib-u-eegis, tayeyn iyo tababbarka alaab-qeybiyeyaasha waxayna qaaddaa tijaabadayada saddexaad ee qaybaha muhiimka ah sanadkiiba si loo hubiyo nidaamyada hawo-qaboojinta ee leh waxqabad aamin ah oo lagu kalsoonaan karo. Inta lagu jiro xakamaynta geeddi-socodka, SONGZ waxay u ololeysaa gebi ahaanba ka-qaybgalka, kormeerka labada dhinac, kormeerka bilowga ah iyo kan ugu dambeeya iyo kormeerka nidaamka oo dhan. Hawlaha muhiimka ah, qalabka tijaabada waxqabadka sare ayaa loo qaatay si loo hubiyo kalsoonida wax soo saarka iyo qalabka ogaanshaha ammonia ee otomaatiga ah ayaa si gaar ah loogu qaatay cidhiidhiga hawada ee nidaamka qaboojinta hawada. Saddex-hal-hal qalabka baaritaanka amniga otomaatiga ah ayaa la qaatay si loo qanciyo shuruudaha ku saabsan badbaadada alaabta. Baadhitaan dhammaystiran ayaa la sameeyaa si loo hubiyo nabadgelyada wax soo saarka iyo isku halaynta. Nidaamka muhiimka ah waxaa lagu falanqeeyaa iyadoo la adeegsanayo SPC si loo hubiyo xasilloonida loona bixiyo xog falanqeyn ku saabsan hagaajinta tayada.
SONGZ sayid adeegsiga wax soo saarka iyadoo loo eegayo jawaab celinta suuqa, si buuxda oo run ah uga tarjumeysa xaalada guud iyada oo loo marayo sahaminta qanacsanaanta, waxay fulisaa PDCA waxayna si joogto ah u hagaajisaa tayada wax soo saarka.
SHAHAADADA IRIS ISO / TS 22163: 2017
Bench Imtixaanka Waxqabadka Hawada
Bench Imtixaanka gariirka
SONGZ Sharafta Gidaarka
Tan iyo markii la aasaasay 1998, SONGZ waxay ku guuleysatay qanacsanaanta iyo ammaanta macaamiisheenna ka timid Shiinaha iyo dibaddaba iyada oo ah soo-saare wanaagsan iyo bixiyaha xalka nidaamyada qaboojinta baabuurta.
Tani waxay si gaar ah u mudan tahay in la muujiyo in SONGZ ay si madax-bannaan u horumarisay "Soo-saarista Teknolojiyada iyo Codsiga Micro Channel Tubes iyo Heat Exchangers", mashruucuna wuxuu ku guuleystay "Sayniska Qaranka iyo Sayniska Teknoolojiyadda Horumar ee Labaad", taas oo ah ammaanta ugu sareysa ee Golaha Gobolka Shiinaha. warshadaha qaboojiyaha baabuurta.
Waxayna SONGZ ku guuleysatay inay ka hesho aqoonsi warshadaha qaboojiyeyaasha baabuurta iyo bulshada wixii tabarucaad ee ay SONGZ ku sameysay horumarinta tikniyoolajiyadda ee warshadaha qaboojiyaha moobiilka iyo masuuliyadda bulshada ee SONGZ ay qaado.
Alaab-qeybiye aad u fiican CRRC, Shiinaha
Alaab-qeybiye aad u fiican Foton, Shiinaha
Alaab-qeybiye aad u fiican oo loogu talagalay Hino, Filibiin
Alaab-qeybiye aad u fiican SANY, Shiinaha
Horyaalka Adeegga Olombikada Beijing
Abaalmarinta Horumarinta Sayniska & Teknolojiyada Shiinaha
Shahaadada Aqoonsiga Shaybaarka CNAS
Shahaadada Aqoonsiga Sheybaarka Alaab-qeybiyaha ee BYD
Mabaadi'da Ganacsiga:Ku dadaal inaad horumariso deegaanka nolosha aadanaha.
Aragtida Ganacsiga:Noqo adduunka''s bixiyaha-qaboojiyaha-fasalka-koowaad.
Siyaasadda Maamulka:Ku qanacsanaanta macaamiisha, qanacsanaanta shaqaalaha, qanacsanaanta saamileyda.
SONGZ Dhaqanka Enterprise
Dhaqanku waa nafta ganacsiga iyo fikradda dhaqanku waa awood aan muuqan oo hawl iyo maaraynba leh. SONGZ waxay u hoggaansamaysay fikradda dhaqan ee "dad u janjeedha" sanado badan.
SONGZ waxay siisaa dhammaan shaqaalaha marxalad ballaadhan, waxay si buuxda u kicisaa xamaasaddooda, waxay u abuurtaa oo u siisaa fursado caddaalad ah iyaga oo rajeynaya inay isla koraan.
SONGZ Kooxda Dhaqanka Caalamiga ah:
Macaamiil Diirad Saaran
Furfurnaan & Kala duwanaansho.
Daacadnimo & U huritaan.
Fudeyd & Qarsoodi.
SONGZ Kooxda Xikmada
La shaqee daacadnimo dhammaystiran oo diiradda saarta horumarka muddada-dheer.
Guusha shirkad waxaa lagu go'aamiyaa shaqo kooxeed. SONGZ waxay leedahay koox maarayn xirfad leh oo la isku halleyn karo oo si wadajir ah ula kororta shirkadda una horseedda shaqaalaha inay gaaraan hadafyadooda iyadoo loo marayo awood isku dhafan oo xoog leh, dareen xoog leh oo mas'uuliyadeed iyo ruux aan go'aamin karin.
Horay ugu soco wadar mahadnaq leh, oo ku soo gooso dhalaal shaqo adag.
SONGZ, Waxay abuurtaa xilli cusub oo qaboojiyaha wareega!